सी जिनपिङसँग विदेश भ्रमणमा किन कम हिड्छिन् चिनियाँ प्रथम महिला पेङ ? – Etajakhabar
जब सी जिनपिङ राजनीतिक करिअर बनाउँदै थिए तब पेङ लिउयान कला र गलाले चिनियाँमाझ लोकप्रीय भइसकेकी थिइन् । चीनकी लोकप्रीय लोकगायिका पेङ ‘सोप्रारनो’ गायिकाका रुपमा पनि चिनिन्छिन् । चिनियाँ नयाँ वर्षमा उनी हरेक वर्ष गीत गाउँछिन् । उनी विगतमा धेरैवटा गायन प्रतियोगितामा सहभागी भई विजेता पनि बनेकी थिइन् । उनको गीत चीनको दूरदराजको गाउँसम्म लोकप्रीय छ ।
सैन्य तालिम समेत लिएकी उनी देशभक्तिका गीत गाउँछिन् । तियानमेङ चोकमा चिनियाँ सेनाले गरेको भनिएको हिंसात्मक कदमको पक्षमा गीत गायको भन्दै आलोचित भइन् । कोकिल कन्ठी पेङको पोशाकको सधै चर्चा चलिरहन्छ । उनी विवकै सबैभन्दा बढी पोशाककी सौखिनमा पर्दछिन् ।
पेङ विगतका चिनियाँ नेताका पत्नीभन्दा भिन्न छिन् । उनी अमेरिकाको प्रथम महिला जसरी पति सीसँग सँगै विदेश भ्रमण गछिन् । विगतमा चिनियाँ राष्ट्रपतिकी पत्नी विदेश भ्रमणमा खासै देखिदैनथिए । पेङ भने राष्ट्रपति सीको सत्तारोहणपछि प्रथम चिनियाँ महिलाका रुपमा विदेश भ्रमणमा पनि गइन् ।
तर, गायनमा व्यस्तत सी कमैमात्र विदेश भ्रमण गछिन् । पछिल्लो समय सीले पत्नी पेङलाई लिएर कमैमात्र विदेश भ्रमण गर्छन् । उनी नेपालमा पनि पत्नी लिएर आएनन् । नेपाल भ्रमण अघि भारतमा पति पत्नी लगेनन् ।पेङ सामाजिक कार्यमा समेत सहभागी छिन् । उनलाई यसकारण पनि चीनभित्र व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ । सेलिब्रिटी समेत भइसकेकी उनी चीनभित्र नरम शक्तिको संचय गर्नेगरी भूमिका खेलिरहेकी छिन् । उनी गीत संगित र कलाका माध्यमबाट चीनमा देशभक्त र एकताको भावना जगाइरहेकी छिन् ।
चीनमा सेलिब्रिटी उनी निकै व्यस्त छिन् । उनी जहाँ जान्छिन् त्यहाँ सी को भन्दा बढी चर्चा हुन्छ । त्यसैले पनि उनी पतिसँगको विदेश भ्रमणमा कमैमात्र जान्छिन् । साभार – रिपोटर्स क्लब नेपालबाट
Posted on: Monday, October 14, 2019 Time: 10:21:36
चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको भ्यक्सिन अब सबैभन्दा पहिले विश्वलाई चीनले नै वितरण गर्ने !
विश्वलाई अचम्मित पार्दै ट्रंपले गरे एकाएक यस्तो घोषणा !
कोरोनाको कहरमा रुमल्लिएको अमेरिकामा अर्को भयावह तस्बीर पनि अगाडि आयो (भिडियोसहित)
‘कोरोना पत्नी जस्तै हो, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन’ भन्दै मन्त्रीले नै भाषण गरेपछि …
कोरोना संक्रमणबारे नयाँ तथ्य फेला पर्यो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यति ठुलो निर्णय लिदै गर्दै छन् यस्तो घोषणा !
चीन-भारतले बढाए लद्दाखको सीमामा सुरक्षा फौज
भारतले नेपालको भुमि मिचेपछी नेपालको समर्थन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाइ दिए यस्तो चेतावनी
-14772 second ago
-12908 second ago
-12092 second ago
-11002 second ago
-5854 second ago
-4585 second ago
-3046 second ago
-1425 second ago